WowPlay | Telenor Myanmar
WowPlay မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
WowPlay Video Streaming Application ဖြင့် ဗီဒီယိုများကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေးကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။
သင်နှစ်သက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီဒီယိုများအပြင် ဟောလီးဝုဒ်၊ တရုတ် နှင့် ထိုင်း အသစ်များကို တယ်လီနောရဲ့ အထူးသီးသန့် video streaming application ဖြင့် နေ့စဉ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဗီဒီယိုများ ကြည့်ဖို့ နည်းလမ်းအသစ်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ဖြေဖျော်ရေး ဗီဒီယိုအမြောက်အများကို တစ်နေရာထဲမှာ လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ့နေပါသလား? တခြားတွေးမနေပါနဲ့တော့။ တယ်လီနောမြန်မာ ဆင်းကတ်အသုံးပြုသူများအတွက် ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်မယ့် WowPlay application ရှိနေပါပြီ။
အားလပ်ချိန်မှာ နှစ်သက်ရာ မြန်မာစာတမ်းထိုး ရုပ်သံတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေပြီး ကွာလတီကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ WowPlay က ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ Application ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို ကြိုတင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားပြီး၊ မိမိနှစ်သက်ရာအချိန်ကျမှ ဖွင့်ကြည့်လို့လည်း ရပါတယ်။
WowPlay ကနေ အဆင့်အတန်းမြင့် ဗီဒီယိုဖိုင်အများအပြားကို သင့်အတွက် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယားနဲ့ ဟောလိဝုဒ်တို့က ရုပ်သံဖိုင်အတိုများ၊ တီဗီ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများနဲ့အတူ ဗီဒီယိုများကို မြန်မာစာတမ်းထိုးနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင်ကြည့်ရှုပြီးသလောက်ကို ခဏရပ်ထားပြီး အားလပ်တဲ့အချိန်ကျမှ ရပ်ထားတဲ့နေရာကနေ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ WowPlay ပေါ်က ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို နေ့စဉ်ဆန်းသစ်ပေးနေတာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရုပ်သံဖိုင်အသစ်တွေကို ခံစားကြည့်ရှုရပါလိမ့်မယ်။
WowPlay ကို video streaming ဒေတာ အစီအစဉ်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင်ကြည့်ရှုမယ့် ဗီဒီယိုနဲ့ သင့်တော်မယ့် ဒေတာအစီအစဉ် တွေကို ရွေးချယ်ပြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ WowPlay ကို ယနေ့ပဲ အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ။
နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းများကို လက်မလွတ်စတမ်းကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
ပြည်တွင်းထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများကို အမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
ကြိက်နှစ်သက်ရာ ကွာလတီကို ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပြီး offline လည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တယ်လီနော ဆင်းကတ်အသုံးပြုသူတွေသာ WowPlay ပေါ် မှာ ရုပ်သံတွေကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay က mobile app ဖြစ်တာကြောင့် ဒေါင်းလုတ်လုပ်တဲ့အခါ တယ်လီနောက သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားတွေအတိုင်း ဒေတာအတွက် ပိုက်ဆံဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay က ရုပ်ရှင်တွေမှာ "Free" လို့စာတမ်းပါရှိရင် ကြည့်ရှုခွင့်အခမဲ့ဖြစ်ပေမယ့် ဒေတာအတွက်တော့ ကျသင့်တဲ့ပမာဏအတိုင်း ငွေဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay နဲ့ WowPlay "VIP" ကတော့ တယ်လီနောဆင်းကတ်အသုံးပြုသူတွေအတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
WowPlay မှာ "VIP" အနေနဲ့ ရုပ်သံတွေ ကြည့်ရှုလိုတယ်ဆိုရင် ကျသင့်ငွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
(က) နေ့စဉ် VIP အတွက် - ၁၉၉ ကျပ် (အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါပြီး)
(ခ) အပတ်စဉ် VIP အတွက် - ၅၉၉ ကျပ် (အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါပြီး)
(ဂ) လစဉ် VIP အတွက် - ၁၅၀၀ ကျပ် (အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါပြီး)
WowPlay ပေါ်မှာ "VIP" စာတမ်းပါ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ချင်ရင်တော့ "VIP" ဖြစ်ခွင့်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အသုံးပြုသူရဲ့ ဖုန်းထဲက ငွေပမာဏကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြတ်သွားမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ "VIP" စာတမ်းပါ ရုပ်ရှင်တွေကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ "VIP" ဖြစ်ခွင့်အတွက် သက်တမ်းတွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
(က) နေ့စဉ် VIP - ၁၉၉ ကျပ် (အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါပြီး) ၊ သက်တမ်း ၂၄ နာရီအတွင်း VIP အဖြစ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) အပတ်စဉ် VIP - ၅၉၉ ကျပ် (အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါပြီး) ၊ သက်တမ်း ၇ ရက်အတွင်း VIP အဖြစ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) လစဉ် VIP - ၁၅၀၀ ကျပ် (အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါပြီး) ၊ သက်တမ်း ၁ လအတွင်း VIP အဖြစ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ VIP တွေကိုတော့ WowPlay က အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးသွားမှာပါ။
VIP သက်တမ်းရှိနေတဲ့အချိိန်အတွင်းမှာ အသုံးပြုသူက နောက်ထပ် VIP သက်တမ်းတစ်ခုကို ထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ရင်တော့ မူရင်းရှိနေတဲ့ VIP သက်တမ်းက အလိုအလျောက်ကုန်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပြီး အသစ်ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ VIP သက်တမ်းကသာ အ ကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက် ဒေတာကုန်ကျစရိတ်တွေကို ဖြတ်တောက်သွားဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay application ဆိုတာဘာလဲ။
ဗွီဒီယိုအားလုံးကို တစ်နေရာထဲ ကြည့်နိုင်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ တယ်လီနောမြန်မာသုံးစွဲသူတွေ အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ App ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းတို၊ အလယ်အလတ်နဲ့ ဗွီဒီယိုအရှည်တွေကို အချိန် နေရာမရွေး ကနေ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ မြန်မာ၊ ထိုင်း ၊ တရုတ်၊ ဟောလိဝုဒ် နဲ့ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေကို ရှာဖွေကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
WowPlay application ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ။
WowPlay ကို ကျွန်တော်တို့ တယ်လီနောမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ သို့မဟုတ် Google Play Store ကနေ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တယ်လီနောမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ “Entertaiment” ကိုသွားပြီးဖော်ပြထားတဲ့ လင့်ကို နှိပ်ကာ App ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်တာနဲ့ သင့်ဖုန်းထဲ အလိုအလျောက်နေရာယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App ဒေါင်းလော့လုပ်ရင် ဒေတာအတွက် သင့်ထံကနေအခကြေးငွေကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီး APK ဖိုင်ရဲ့ အရွယ်အစားက 22 MB ဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay application ကိုဘယ်လို သုံးစွဲရမလဲ။
App ကို install လုပ်ပြီးရင် သင့်ရဲ့ တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မေးမြန်းချက်တွေကို ဖြည့်စွက်ပြီး ဗီဒီယိုတွေကို ဒီနေ့ပဲ ပျော်ရွှင်စွာကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
WowPlay application မှာ ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာတွေကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ။
WowPlay ထဲမှာ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေ၊ ဇာတ်လမ်းအလန်းစားတွေ၊ အာရှဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဟာသနဲ့ တခြားဗီဒီယိုတွေကို ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုအားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့က အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ရှာဖွေလိုတယ်ဆိုရင်တော့ search tab မှာ ဗီဒီယိုအမည်ကို ဖြည့်စွက်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
WowPlay ကဗွီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့အတွက် ဒေတာကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဒေတာအတွက် ကျသင့်ငွေ ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်နဲ့ ကိုရီးယားရုပ်သံဇတ်လမ်းတွေကိုတော့ VIP အခွင့်အရေးဝယ်ထားမှ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VIP အခွင့်အရေး ဝယ်ချင်ရင်တော့ နောက်ပါနှုန်းထားအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Data Suboo လိုမျိုး ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်တွေဝယ်ပြီး WowPlay ကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ဒေတာအတွက် အသက်သာဆုံးနှုန်းထားကို အကျိုးခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ် ဆင်းကဒ် ဖြင့် မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
တယ်လီနော ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Andriod (သို့) IOS ဖုန်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
လက်ရှိမှာတော့ Mobile App ကို Andriod User များသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။
WiFi ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Wifi ဖြင့် အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။
WowPlay application မှ ဗွီဒီယိုတွေ ဘယ်လို ကြည့်လို့ရနိုင်မလဲ။
သာမာန် Data Pack (သို့) WowPlay VIP Pack ဝယ််ယူ ၍ ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
WowPlay application မှ ဗွီဒီယိုတွေ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါသလား။
တချို့ဗီဒီယိုတွေကို သင့်အနေနဲ့ ဒေါင်းလော့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြည့်ရှုပြီး ဒေါင်းလော့လုပ်လိုရင် ဒေါင်းလော့ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
WowPlay application ကို ဘယ်လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်အသုံပြုနိုင်မလဲ။
ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ။ ပြီးရင် APK file ကို install လုပ်ပါ။
ပြီးနောက် Free VIP monthly ကို ရယူပါ။"
WowPlay က VIP အခွင့်အရေးကို ဘယ်လို ဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ
၁. App ကို install လုပ်ပါ။
၂. နှစ်သက်ရာ ရုပ်သံကို ကြည့်ရှုရန်နှိပ်ပါ။
၃. “Get VIP” စာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။
၄. နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ် VIP အခွင့်အရေးများကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ မိမိနှစ်သက်ရာ VIP အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ရွေးပါ။ Subscribe ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ကျသင့်ငွေ (အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း မပါဝင်သေးပါ)ကို တယ်လီနောဖုန်းဘေလ်ထဲမှာ ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
၅. Confirmation message ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး “ok” ကိုနှိပ်ပါ။
၆. Subscribe လုပ်ထားသည့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါ သက်တမ်းကို အလိုအလျောက်တိုးမြင့်သွားပါမည်။
၇. ရုပ်ရှင်များကို ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ပါပြီ။